रसियाकी पाल्माको मन छुने वास्तविक कथा, युट्युबमा अंग्रेजी सबटाइटलसहित :: सेतोपाटी टिम :: Setopati
कुकुरलाई संसारभरि मान्छेको निकट साथीका रूपमा लिइन्छ। घरको रक्षा गर्नु, चोरबाट खबरदारी गर्नु, प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगाउन सघाउनु वा उहिले–उहिले शिकारीलाई जंगलमा साथ दिनु कुकुरका केही सामान्य फाइदा हुन्।
यसबाहेक वैज्ञानिकहरूले कुकुर र मान्छेबीच भावनात्मक सम्बन्ध पनि भएको बताएका छन्।
मतलब, मान्छेलाई पीडा हुँदा कुकुरले पनि पीडा अनुभूत गर्न सक्छ। मान्छेको खुसी र दुःखलाई महसुस गर्न सक्ने खुबी कुकुरमा हुन्छ। अनि आफूलाई पाल्ने मान्छेप्रति उसको अगाध प्रेम र लगाव हुन्छ।
यस्तै कुकुर हो, आल्मा।
जर्मन सेफर्ड प्रजातिकी पोथी कुकुर आल्मालाई रूसका एक व्यक्तिले पालेका हुन्छन्। उनी आल्मालाई लिएर प्राग जान हिँड्छन्। मस्कोको नुकोभो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज चढ्ने बेला उनलाई कुकुर लैजाने प्रमाणपत्र नभई जान नदिने भनिन्छ।
उनी आल्मालाई नलिई जान नसक्ने बताउँछन्। कर्मचारीले उनलाई विमानस्थलमै रहेको भेटिरिनरी क्लिनिकमा कुकुरको जाँच गराएर प्रमाणपत्र ल्याउन सुझाउँछिन्। प्रमाणपत्र ल्याउन्जेल जहाज उडान ढिलो गरिदिने बताउँछिन्।
तर डाक्टरले आल्मालाई संक्रमण भएको भन्दै लैजान नमिल्ने भन्छन्। त्यसपछि ती व्यक्ति आत्तिँदै तिनै कर्मचारीलाई गुहार्छन्। कर्मचारीलाई ती व्यक्ति र आल्माको स्नेहले पगाल्छ। त्यसैले बिनाप्रमाणपत्र लैजान दिन्छिन्।
त्यही बेला विमानस्थलकी मुख्य कर्मचारी आएर उनलाई रोक्छिन्। ती व्यक्तिले कुनै हालतमा आल्मालाई लैजान पाउँदैनन्। उनलाई प्राग नगई पनि भएको छैन। त्यसैले आल्मालाई विमानस्थलमै छाडेर उनी जहाज चढ्छन्।
आल्मा आफ्नो मालिक चढेको जहाज पछ्याउँदै धावनमार्गमा बेतोड कुद्छे। तर जहाज भेट्टाउन कहाँ सक्छे र!
उसको निरश अनुहारले ऊभित्र उछालिएको पीडा देखाउँछ। त्यही बेला विमानस्थलका सुरक्षा कर्मचारी आल्मालाई नियन्त्रणमा लिन आउँछन्। ऊ दगुर्दै विमानस्थल नजिकै रहेको एक कारखानामा पुग्छे। त्यहाँ विमानस्थलकै पुराना कर्मचारी पुराना जहाजहरूको मर्मत गर्छन्।
उनले आल्मालाई सुरक्षाकर्मीबाट जोगाउँछन्। तर आल्मा ऊसँग निकट भइहाल्दिन। ऊ विमानस्थलमै ओहोरदोहोर गर्दै आफ्नो मालिक कुरेर बस्छे। जसै एक दिन उसको मालिक चढेको जहाज फर्केर आउँछ, ऊ दगुर्दै पुग्छे। धावनमार्गमा ऊ कुदेकै कारण अवतरण हुन लागेको जहाज मोड्नुपर्छ।
मालिक जहाजबाट ओर्लेलान् र आफूलाई अँगालो हाल्लान् भन्ठानेर बसेको ऊ निराश हुन्छे। विमानस्थलमा कुकुर देखेर यात्रुहरू तर्सिन्छन्। उसलाई सुरक्षाकर्मीले बसभित्र थुनिदिन्छन्।
त्यही बेला एउटा घटना हुन्छ।
पाइलटका साना छोरा कोल्या जहाजबाट झर्छन् र आल्मालाई देख्छन्। उनले सुटुक्क आल्मालाई बसबाट निकालिदिन्छन्।
यो देखेर विमानस्थलका कर्मचारी रिसाउँछन्। पाइलटमाथि सोधपुछ हुन्छ। जहाज उडाएर जाँदासम्म बिहे पनि नभएका पाइलटका छोरा कहाँबाट आए भनेर सबै चकित खान्छन्।
उता कोल्याको बाबुसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। त्यति कलिलो छोराले आफ्नो बाबुलाई किन मन पराउँदैनन्? उसकी आमा कहाँ हुन्छिन्?
कोल्या बाबुसँग बस्न मान्दैनन्। उनी आल्मासँग नजिकिन्छन्। आल्माको नाम पाल्मा राख्छन्।
तर उसकी पाल्मा हरेकपटक जहाजको पछाडि दगुर्दै उसकै मालिक कुरिबस्छे।
अब कोल्याको पाल्मासँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ? के उसका पहिलेका मालिक फर्केर आउँछन्? उसले कहिलेसम्म कुरेर बस्ला? के पाल्माले कोल्यालाई स्वीकार्ली? विमानस्थलबाट सुरक्षित रूपमा बाहिरिन पाउली?
यो सबै जान्न फिल्म 'अ डग नेम्ड पाल्मा' हेर्नुहोला। यो सन् १९७४ देखि १९७६ बीच भएको वास्तविक घटनामा आधारित फिल्म हो।
सन् २०२१ मा रिलिज भएको यो फिल्म केटाकेटीसँग बसेर हेर्न मिल्ने फिल्म हो। रूसी भाषामा भए पनि यसमा अंग्रेजी सबटाइटल छ।
आज गुड फ्राइडे सिनेमामा परिवारै बसेर यो फिल्म हेर्न सक्नुहुनेछ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ७, २०७९, ००:५०:००
'अमेरिकन आइडल १८' बाट चर्चा कमाएका दिवेश पोखरेल नेपाल आउँदै
फिल्ममेकरले पख्लास् तँलाई मेरो फिल्म नखेल्ने भनेजस्तो गर्नुहुन्छ: विपिन कार्की
फिल्म 'ऐना झ्यालको पुतली' भदौ २४ गते प्रदर्शन हुने
सुदर्शन थापाको निर्देशनमा 'प्रसाद २' को निर्माण घोषणा